Ambongadiny Chandelier PC-8261 efitrano fandraisam-bahiny Hotel Project Lighting haingon-trano Customize Big Crystal Chandelier mpanamboatra sy mpamatsy | Langsheng
Chandelier PC-8261 efitrano fandraisam-bahiny Hotel Project Lighting Decorative Customize Big Crystal Chandelier
Haben'ny: savaivony 60/80/100
faritra azo ampiharina: 15-30m
toerana azo ampiharina: haingon-trano / efitrano fandraisam-bahiny, efitrano fandriana, efitrano fisakafoanana, duplex, sns. / Toerana fivarotana / toerana fialamboly
Ampiasao ny chandelier Salerno hampidirana ny endrika Art Deco mahafinaritra ao an-tranonao. Ity chandelier vita amin'ny nickel plastika mahavariana ity dia mamelombelona ny fahaverezan'ny taona 1920. Vera miloko miadana tsikelikely mamoaka hazavana mahafatifaty. Chandelier nopetahany boaloboka tsara tarehy mamoaka ny fihodinan'ny taona 1920. Vera miloko miadana tsikelikely mamoaka hazavana mahafinaritra.
Mampiasà chandelier marefo hanatsarana ny tontolo iainana anatiny. Miaraka amin'ny firafitry ny fitaratra manokana sy ny endriny, ity chandelier mpamorona kanto ity dia mampiseho ny hakantony sy ny lamaody. Mampiseho taratra mazava ny bao, mamorona vokarin'ny jiro mahafinaritra.
Mandefasa endrika Art Deco mahafinaritra ao an-tranonao miaraka amin'ny Salerno Chandelier. Ity chandelier replika kanto ity miaraka amin'ny famaranana varahina dia mampiharihary ny rivo-piainana mamirapiratra tamin'ny taompolo 1920. Tavoahangy fitaratra setroka marokoroko marobe no mipoitra amin'ny hazavana mahavariana.
Teo aloha: Chandelier PC-8312 Chandelier injeniera momba ny jiro metaly vaovao
Manaraka: Chandelier PC-202 efitrano fandraisam-bahiny Hotel Project Lighting Decorative Customize Big Crystal Chandelier
Chandelier 86018-L45 Jiro kristaly mihaja ...
Chandelier PC-8289 Nordic chande kristaly maoderina ...
Chandelier PC-8237 Zavakanto ...
Chandeliers SPWS-0C15 Personal-post-modern ...
Chandelier PC-8331 Art kanto chandelier olona ...